Lapho befuna okungcono izitolo vintage eYurophu, ungenaso kuphela afuna kwalezo zinxenye ezingaphelelwa isikhathi. Ungene futhi ukuthatha uhambo phansi Memory Lane futhi ukuhlola umlando. A esitolo vintage lifana semfashini Museum, eyabonisa isiko a dolobha nomlando walo. Siyathanda ukuhlola emadolobheni entsha nejabulisayo ngesitimela, futhi ekutholeni esiyingqayizivele futhi izingubo ezingaphelelwa isikhathi ngenye indlela fun yokwenza ke. Nazi Kuhle Izitolo Vintage eYurophu nokuthi ungafika kanjani lapho ngesitimela.
Izitolo ezihamba phambili zeVintage eYurophu eParis: Mahhala P Star
Uma uke selehla isitimela, ukuma kwethu kokuqala kungaba kwiFree P-Star. Uma uthanda thina, uku umthandi zonke izinto Retro, ke akukho jaunt enhlokodolobha fashion Europe kuzokuphela ngaphandle ukumisa kunezinxushunxushu ngokumangalisayo Mahhala P Star. Ngokungafani nezinye izitolo vintage Paris, FREE'P'STAR akusho nje adayise French lesibili ngesandla izingubo. Badayisa izingubo lesibili ngesandla wase-United States kakhulu futhi ngezinye izikhathi ngisho okudaliwe omusha owenziwe zimpahla. Kukhona uhla enkulu kakhulu ngokuncintisana ontengo yakhe yayinqunyiwe izingubo amagilebhisi izesekeli kusukela 70s kuya ekhulwini lama-21.
Nakuba Paris kungenzeka ingenye yezindawo avakashelwa eYurophu, Sicabanga ukuthi iBerlin iyikhaya lezinye izitayela zasemgwaqeni ezingashisi kakhulu eYurophu. Ngakho akumangalisi-ke, ukuthi Berlin is echichima ezinye Izitolo ezihamba phambili zeVintage eYurophu. Esinye sezisho yethu siqu nokuba Hubelani Blackbird. Akhiwe wesifunda Arty ka Neukolln itheku lesibili ngesandla ihlanganisa iqoqo yayo eclectic of isembatho vintage nge cafe ngokukhethekile ukudla vegan. Sinomuzwa lokhu ulunika onqenqemeni yangempela futhi yisizathu esinamandla nakakhulu sokuhlala esitolo, udle! It has a utalagu umklami izicucu kusukela 70s’ kuya 90s’ kanye esihlwabusayo ngezandla awukudla, Hubelani Blackbird a winner kubo bonke ozinikezele Foodie!
Umelani ngaphandle njengoba inhlokodolobha yamasiko Catalonia, Barcelona ine avant-garde nokuzwakala okwamanje onekhono. Ukunikela izakhiwo zesimanje, izakhiwo medieval, cuisine okudala, futhi kuyachwaza nightlife. Barcelona ingenye phezulu travel izindawo European. Futhi njengoba siya ku Summer, kumayelana ukuze uthole super umatasa. Ngakho qiniseka ukuthi ukubhuka amathikithi akho isitimela Ekuqaleni SaveATrain. Akukhona nje kuphela ukuthi amanye Barcelona ikhaya Kuhle ezitolo Vintage eYurophu, kodwa futhi kungenye yehlobo elidume kakhulu iholide izindawo. Phakathi bedla okumnandi tapas futhi ukushuka kwenye eziningi amabhishi, zinike isikhathi ukuvakashela futhi Swing. Lokhu Boutique langa vintage Itholakala nemfashini endaweni Born. Egcwele ngesandla akhethiwe umklami izingubo, izikhwama, ubucwebe, nezicathulo, lesi sitolo snazzy Izitokhi izingubo vintage kusuka zonke eyishumi kwekhulu lama-20.
IGeneva yidolobha lamaphupho ngenxa yesimo esiyingqayizivele nokubukwa okuhle kweMont-Blanc. Intaba ephakeme kunazo zonke e-Europe. I emaphandleni, indawo ephelele imisebenzi yangaphandle, kuyinto imizuzu embalwa nje kude nomuzi. Geneva is the best starting point to visit the rest of Switzerland sibonga enhle kakhulu umphakathi uxhumano ezokuthutha ngesitimela.
Ungahle ucabange .... Yilokho ulwazi enhle nabo bonke, kodwa baphi izingubo at, intombazane?! ngiyazi, Geneva angeke eyaziwa ngokuthi idolobha engongi, kodwa yingakho uthola nathi. Ukuze ahlunge amagugu afihliwe ngoba uthanda lo. Kwabahambi abathanda imali abafuna ukwenza umdlalo wabo wokuvuna ngaphandle kokuthengisa umphefumulo wabo, Isitolo Sezilwane ekhatsi Geneva kuyindlela phambili!
Ingxenye ye-Swiss Red Cross, esitolo vintage is imfashini kakhudlwana kwayiwa kuka esiza abantulayo esitolo yayo nozakwabo. It kuphela ethengisa ngesandla abelethwe izingubo Retro kusuka brand yisakhiwo sodumo ezifana Givenchy futhi Celine. Ngakho, ngabe uku umthandi lesibili ngesandla imfashini zokuziphatha, ezepolitiki, noma izizathu zomnotho, Hlola Isitolo Sezilwane. Abagcini ukuqhutshwa besiya ekusizeni abantu abadinga usizo kodwa futhi okunye Wamukelekile amanani isibhakabhaka-eziphakemeyo zomuzi Swiss!